Waxqabadka Neymar da Silva Júnior oo ay maanta ku beegan tahay markii uu dunida ku soo biiray – Gool FM
Waxqabadka Neymar da Silva Júnior oo ay maanta ku beegan tahay markii uu dunida ku soo biiray
(Paris) 05 Feb 2020. Neymar da Silva Santos Júnior oo loo garan ogyahay Neymar Jr ayaa dunida ku soo biiray maanta oo kale 05 bishii February sanadkii 1992-kii, waa mid ka mid ah magacyada ugu weyn ee kubadd cagta waqtigan.
Weeraryahanka kooxda kuabdda cagta Paris St-Germain iyo xulka qaranka Brazil ee Neymar ayey maanta ku beegan tahay dhalashadiisii 28-aad, waxaana u hambalyeynaya dhammaan asxaabtiisa iyo Wargeysyadda ugu waweyn ee kubadd cagta, iyadoo la soo bandhigay waxqabadkiisa.
25-sano jirkaan ayaa noqday laacibka ugu qaalisan caalamka, kaddib markii ay Kooxda Paris St-Germain si rasmi ah ula soo wareegtay laacibka u dhashay Brazil ee Neymar oo ay 200 oo milyan oo Pound ka siisatay kooxda Barcelona.
Neymar Jr ayaa xirfaddiisa ciyaareed dheelay kulammo gaaraya 497 kulan oo rasmi ah, waxa uuna diiwaan galiyay inuu dhaliyay 302 gool, yeelkeede waxa xusid mudan inuu caawiye ka noqday 191 gool oo ay dhaliyeen saaxiibadiisa dhammaan Kooxihii uu soo matalay.
Neymar ayaa xirfaddiisa ciyaareed soo matalay saddex kooxood oo kala ah Kooxda reer Brazil ee Santo, waxa uu kaddib ku biiray Barcelona taasoo uu markiii dambe kaga sii wareegay naadiga uu haatan ka tirsan yahay ee Paris St-Germain, waxaana uu ku guuleystay koobab aad u fara badan, maadaama uu diiwaan galiyay hanashada 21 koob oo muhiim ah.
Neymar abaal-marinta qiimaha leh ee lagu xasuusto waa inuu ku guuleysatay sanadkii 2011-kii biladda Puskas Award oo la siiyo xiddiga dhaliya goolka ugu quruxda badan kubadda cagta caalamka sanadkaas, inkastoo Neymar uu marar badan masraxyada ugu waweyn ee kubadd cagta uu kula tartamay Messi iyo CR7, haddana uma aysan suura-galin inuu ku guuleysto biladda xiddiga adduunka.
Neymar da Silva Santos Júnior Jr, kaasoo dunida ku soo biiray 5 bisha February sanadkii 1992-kii, maanta ayeyna ku beegan tahay dhalashiisa.
Hudson-Odoi, Abraham & Pulisic oo hoggaaminaya liiska xiddigaha Chelsea ee ka qeyb galaya wareegga 16-ka Champions League